Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo Asa fanatanterahana ny Politika ankapoben'ny Fanjakana – 8 jona 2021 | Primature
Lahateny fanolorana ny Tatitra mahakasika ireo Asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana – 8 jona 2021
8 juin 2021 16 octobre 2021
Ramatoa Filohan’ny Antenimieram-pirenena
Ramatoa sy Andriamatoa isany Mpikambana ao amin’ny Birao maharitra
Ramatoa sy Andriamatoa isany Ministra, Mpikambana ao amin’ny Governemanta
Ramatoa sy Andriamatoa isany Solombavambahoakan’i Madagasikara
Isika rehetra manatrika etoana,
Arahabaina ampifaliana daholo ianareo ary faly hatrany izahay Mpikambana amin’ny Governementa tonga mifandinika aminareo Solombavambahoaka rehetra maneran’i Madagasikara.
Araka ny Lalampanorenana amin’ny Andininy faha-101 sy 102 dia ity fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ity no voatokana hanaovan’ny Governemanta ny tatitra ny asa vita tamin’ny taon-dasa, koa dia tonga manatrika anareo eto izahay hanantanteraka izany.
Ety ampiandohana dia tianay ny manambara etoana fa na dia teo aza ny valan’aretina Covid-19 dia niroso hatrany ny fanatanterahana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana.
Nataon’ny fitondrampanjakana ho laharampahamehana ny fitsinjovana ny aimbahoaka tao anatin’izany fotoana izany ka niarahantsika nisalahy tamin’ny alalan’ny Tetibola nasiampanitsiana 2020 sy ny Tetibola 2021.
Izao tatitra izao dia misy fizarana dimy mahakasika ny Covid-19, ny fitantanana, ny filaminana sy fandriampahalemana, ny toe-karena sy fotodrafitrasam-pamokarana, ary ny sosialy.
1- Ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19
Maro ireo ezaka nentina niady tamin’ny valanaretina Covid-19. Nomen-danja manokana tamin’izany ny ara-pahasalamana ary ny ara-tsôsialy.
1 Ny eo amin’ny lafiny ara-pahasalamana
Teo ambany fitarihan’ny Filohan’ny Repoblika, ny Governemanta manontolo no nandray an-tànana ny fanantanterahana ny paikady iadiana amin’ny valanaretina Coronavirus.
Tamin’ny taona 2020, dia tafiditra tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana ny firenentsika nanomboka ny faha-21 marsa 2020 ka hatramin’ny faha-18 oktobra 2020. Tamin’ity taona 2021 ity dia niditra indray mandeha ato anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara nanomboka ny faha-3 aprily 2021. Izany no midika fa mbola miady amin’izao valanaretina izao isika Malagasy ohatry ny firenena rehetra eran-tany.
Nanomboka tamin’ity taona ity, ny Ministera misahana ny Fahasalamambahoaka no mandrindra ny asa andavanandro ho fanatanterahana ny paikady napetraka. Tany amin’ny faritra kosa dia napetraka nanaraka izany ihany koa ny Centre Régional de Commandement Opérationnel na CRCO mba ahafahana mandrindra ny asa.
Noho izany dia nahetsika ny mpiasan’ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana, ny mpiasam-panjakana, ny olon-tsotra nilatsaka antsitrapo maro ary ny “services essentiels” manerana ny Nosy hiatrehana izany ady amin’ny valanaretina izany.
Ny paikady dia nizara 7 (fito) lehibe:
Ny fanentanana ny mpiray tanindrazana manontolo hanaiky ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ireo fepetra sakana rehetra mba hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina. Mba ho fanitsiana sy fitaizana ny tsy manara-dàlana dia napetraka ny Asa ho an’ny tombontsoa iombonana na Travaux d’Intérêt Général.
Nampiharina ny “Approche syndromique” mba ho fandraisana an-tànana ara-pahasalamana mivantana ary haingana ny olona mitondra ny soritr’aretina sy ireo olona nifandray aminy. Izany no natao mba nentina nisoroka mialoha teny ifotony ny valanaretina. Ny fanafody sy ny fandraisana an-tànana rehetra dia nomena maimaim-poana avokoa ary niantsorohan’ny fitondram-pajakana manontolo ny fandaniana tamin’izany.
Nohon’ny finiavan’ny fitondram-panjakana hanana tobi-pitiliana Malagasy dia natsangana ny laboratoire vaovao LA2M eny Androhibe mba ahafahana manao sy manafaingana ny asa fitiliana amin’ny otrik’aretina.
Ny hopitaly sy ny tobim-pahasalamana rehetra teto amin’ny Nosy dia nametraka ho laharam-pahamehana ny fandraisana marary voan’ny Covid-19. Kanefa noho ny fahateren’ireo toerana ireo dia nosokafana ny Centre de Traitement de Covid-19 na CTC-19 eran’ny faritra izay nahitana tranga mihoapampana mba handraisana an-tànana ireo izay marary : CTC Village Voara Andohatapenaka, Mahamasina, Ivato, Ankorondrano, Soamandrakizay, Mandrimena Andoharanofotsy, Vatofotsy Antsirabe, Andrainjato Fianarantsoa, Lafitsinanana Fort Dauphin. Teto Antananarivo dia natao ihany koa ny fifampiraharahana tamin’ireo tompon’ny hôtels ka nahafahana nanokatra Hotels-Hopitaux maromaro, toy ny Hôtels-Hôpitaux Tsangatsanga Hôtel, Live hôtel Andavamamba, Le Pavé Analakely, Anjary Hôtel Tsaralalana, Môtel de Tanà Anosy.
Novatsiana fanafody sy fitaovana ireo hôpitaly, tobim-pitsaboana, CTC-19 ary Hôtels-Hôpitaux rehetra manerana ny Nosy mba hiatrehana ny valanaretina. Naparitaka avokoa ireo Concentrateurs d’oxygène miisa 2.400 ary niampy bouteilles d’oxygène miisa 2.000.
Nohezahana naparitaka ny Tambavy CVO sy ny fanafody CVO+. Namporisihina hatrany koa ireo mpikaroka Malagasy eto amintsika hamokatra fanafody mifandraika amin’ny ady amin’ny valanaretina.
Nanomboka tamin’ny volana aprily 2021 dia niditra ao anatin’ny Tambazotra COVAX miaraka amin’i OMS sy ny Tambazotra AVATT izay arindran’i Vondrona Afrikana i Madagasikara. Tamin’ny faha-8 may 2021 dia tonga teto Madagasikara doses-na vaksiny AZ Covishield miisa 250.000. Efa miparitaka any amin’ny faritra 22 ny vaksiny amin’izao fotoana izao. Mahatratra 62.662 no isan’ny olona efa vita vaksiny amin’izao fotoana izao.
Ankehitriny, nahitana vokatra mahasoa ny firenentsika izany ezaka rehetra izany. Omaly dia 52 ny isan’ny tranga vaovao maneran’ny Nosy, 5 ny maty,509 ny isan’ny olona izay mbola tsaboina ary 52 ny isan’ny olona sitrana.
Raha tato anatin’ny taona 2020-2021 dia toy izao ny tarehimarika azo avoitra:
41.742 (roa amby efapolo sy fiton-jato sy arivo sy efatra alina) no trangana Covid-19 voamarina
41.112 (roa ambin’ny folo amby zato sy arivo sy efatra alina) no sitrana
866 (enina amby enimpolo sy valon-jato) no lavo nandritra izay fotoana izay.
Miondrika ampanajana manoloana ireo Malagasy sy ireo olona rehetra lavon’ity valanaretina ity eto amintsika. Manantitra ny teny fampiononana ho an’ireo fianakavian’ny maty rehetra ny fitondram-panjakana ary androany isika dia mahatsiaro manokana ireo Solombavambahoaka izay nandao antsika vokatr’izany valanaretina izany.
Eto koa isika dia mirary koa raha mirary fahasitranana haingana sy feno ho an’ireo mbola ao anatin’ny fitsaboana tanteraka amin’izao fotoana izao ka mitondra ambavaka ho azy ireo.
2 Eo amin’ny lafiny sosialy
Misandrahaka amin’ny ezaka mifototra amin’ny sosialim-bahoaka ny natao mba nanalefahana ny fiantraikan’ny valanaretina amin’ny fiainam-bahoaka:
– Voalohany, napetraka nyVatsy Tsinjo izay fizarana sakafo entina hanohanana ireo ankohonana niharan’ny fahasahiranana nateraky ny fepetra ara-pahasalamana izay noraisina ho an’ny fianakaviana 430.898 (valo amby sivifolo sy valon-jato sy telo alina sy efatra hetsy) tany amin’ny Distrika Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Toamasina, Fianarantsoa, Amboasary Atsimo, Taolagnaro, Ambovombe ary Ampanihy
– Nisy ihany koa ny fitsinjarana vola tsy misy fepetra “Tosika fameno” ao anatin’ny programan’asa ara-tsosialy izay nentina nanampiana tokantrano miisa 480.360 (enim-polo sy telon-jato sy valo alina sy efatra hetsy) amin`ny distrika maromaro, toy ny eto Antananarivo-Renivohitra, Antananarivo-Avaradrano, Antananarivo-Atsimondrano, Ambohidratrimo, Toamasina I, Toamasina II, Fianarantsoa, Lalangina, Tsiroanomandidy, Miarinarivo, Morondava, Antsirabe I, Antsirabe II, Nosy be, Mahajanga, Betioky Atsimo, Ampanihy, Toliara II, Beloha, Tsihombe, Taolagnaro, Ambovombe-Androy, Bekily, Amboasary Atsimo
– Fanampiana vonjy maika “Ankohonana Miatrika”. Tokantrano miisa 366.170 (fito-polo amby zato sy enina arivo sy enina alina sy telo hetsy) no misitraka vola 50.000 (dimy alina) Ariary mandritra ny 5 volana ao anatin’ny Distrika maro eto amintsika toy ny an’ny Betioky, Ampanihy, Toliara II, Beloha, Tsihombe, Taolagnaro, Ambovombe, Bekily, Amboasary Atsimo
– Fitsinjarana vola misy fepetra eny amin`ny tanan-dehibe izay nahakasika tokantrano 160.000 (enina alina sy iray hetsy) amin`ny distrika enina (6) : Antananarivo Renivohitra, Antananarivo sy ny manodidina, Fianarantsoa I, Lalangina, Toamasina I, Toamasina II
– Ao anatin’ny sehatra Vola Takalon’ny Asa “Asa Avotra Mirindra” : Fanarenana ny foto-drafitr’asa mampiasa asa tanamaro; tokantrano miisa 55 000 amin’ny distrika enina (6) : Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina, Fianarantsoa I, Lalangina, Toamasina I, Toamasina II
– Fitsinjovana ireo mpianatra eny amin’ny oniversite tsy afaka nody nandritra ny hamehana, dia nampisitrahana tohana ara-tsosialy sy ara pahasalamana izy ireo
Marihina fa nanome tànana amin’izao ady ataontsika izao ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola amintsika
2- Ny lafiny Fitantanana
2.1. Mahakasika ny Andrimpanjakana
Zava-dehibe tokoa ho antsika ny famerenana ary ny fanamafisina orina ny maha-fanjakana tan-dalàna ny eto amintsika. Araky ny voafaritry ny Lalam-panorenana dia notanterahina ny fanavaozana ireto Andrimpanjakana ireto: Ny Antenimierandoholona sy ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàmpanorenana.
Vita tokoa tamin’ny Zoma faha-11 desambra 2020 ny fifidianana ny loholona vaovao ary nanomboka tamin’ny Alakamisy faha-7 janoary ny fotoam-mpiasan’ny Antenimierandoholona mandritra ny 5 (dimy) taona ho avy.
Tafatsangana ihany koa ny Fitsarana Avo momban’ny Lalàmpanorenana ka nandray ny asany ny mpikambana vaovao nanomboka ny Alakamisy faha-8 aprily 2021 mandritra ny 7 (fito) taona.
2.2. Mahakasika ny tontolon’ny Fitsarana
Ao anatin’ny tanjona ametrahana fanjakana tan-dalàna dia vato fehizoro iray lehibe ny Fitsarana sy ny tontolony, izay ezahina hanakaiky kokoa hatrany ny vahoaka. Arak’izany dia naverina ary araha-maso akaiky dia akaiky ny fandraisana mpitsara vaovao ary amafisina tanteraka ny ady amin’ny kolikoly, indrindra, eo anivon’ny Fitsarana.
Nohavaozina ny biraon’ny Filankevitry Ambonin’ny Mpitsara (CSM) ary napetraka tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny faha-20 desambra 2020.
Fantatsika ihany koa fa navaozina tamin’ny Alarobia faha-28 aprily 2021 ny mpitantana eo anivon’ny Sampandraharaha Malagasy iadiana amin’ny Famotsiam-Bola (Samifin), araka ny takian’ny lalàna mifehy azy.
Eo amin’ny tontolon’ny Fitsarana ihany dia eo andalam-panantanterahana ny fananganana ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) ao Antananarivo-Avaradrano, Sainte-Marie, Ambilobe, Sambava, Besalampy ary Belo-sur-Tsiribihina. Ireo TPI ireo dia vinavinaina ho vita alohan’ny faran’ny taona.
Manarak’izany, miara-miaiky isika fa tery sy antitra ny fonja eto amintsika. Mitohy hatrany ny ezaka fanavaozana ary fananganana fotodrafitr’asa vaovao mahakasika ny fonja, toy ny asa fananganana trano famonjana amin’ny Distrika ao Fenoarivo-Atsinanana, Amboasary-Atsimo, Belo-sur-Tsiribihina, Ambositra, Antananarivo-Avaradrano, Fianarantsoa I. Ny ao Sainte-Marie dia misy fahatarana kanefa tsy maintsy ho atao araky ny vinavina. Natsangana ihany koa ny fonjabe ho an’ireo gadra voaheloka mandra-pahafatiny sy ireo manao heloka goavana (criminels dangereux) any Arivonimamo, Toamasina I ary Ihosy.
Izany rehetra izany moa dia zava-poana ihany raha tsy misy ny fanatsarana ny fandraharahana ny fonja. Izany tokoa no nahatonga ny fandraisana ho mpianatra vaovao ho mpandraharahan’ny fonja mahatratra 500 (dimanjato) izay hanomboka ny taom-pianarana amin’ny volana Jolay ho avy izao.
Natolotra tamin’ny janoary 2021 ny Fandraharahana ny fonjan’Antananarivo renivohitra ny fiara minibus iray sy fiara mpitatitra voafonja (véhicule cellulaire) manaraka ny fenitra sy ny vanim-potoana. Nisitraka fiara 4×4 vaovao ny sampandraharaham-pitsarana amin’ireto distrika ireto : Ankazoabo-Atsimo, Fianarantsoa ary Antananarivo.
Ny ezaka rehetra vita dia nahafahana nanatsara miandàlana ny tontolon’ny fitsarana eto amintsika ka izay no nahatonga amin’izao fotoana izao ny tahan’ny olona voafonja izay efa voatsara efa manakaiky bebe kokoa ny 45%.
2.3. Eo amin’ny fitsinjaram-pahefana, ny fampandraisana andraikitra ny vondrom-bahoakam-paritra ary ny asam-panjakana
Vita ny famolavolàna ny Lettre de Politique de Décentralisation Emergente (LPDE) niarahana tamin’ireo sehatra maro (Ministera isantokony, Kaominina, Faritra, Mpiara miombon’antoka, Fiarahamonim-pirenena, sns) ary efa nahazo fankatoavana teo amin’ny Filankevitry ny Ministra izany tamin’ny Alarobia faha-26 May 2021 ary efa tafapetraka eto anivon’ny Parlemanta io volavolan-dalàna io amin’izao fotoana izao. Atomboka ny volana Jolay ho avy izao ny famolavolàna ny Plan National de Décentralisation Emergente izay hatao miaraka amin’ireo mpisehatra rehetra eny ifotony.
Fiovana goavana natomboka tamin’ny taona 2020 ny famindrana ny fitantanana ny tsenam-baro-panjakana, toy ny fananganana sekoly sy tsena ary biraom-panjakana isan-karazany, ho amin’ny Faritra. Ny fitaomana hanao tolo-bidy isan-karazany (Appels d’offre) dia ho andraikitry ny Faritra mba ahafahan’ireny orinasa madinika sy salantsalany any amin’ny Faritra ireny mba mandray anjara.
Mbola notohizina ihany koa ny fivorian-dehibe isam-paritra momba ny teti-bolam-panjakana ahafahana manome lanja ireo tena laharam-pahamehana sy ny filàna amin’ny fampandrosoana, mba ahazoana mamaritra mazava ireo teti-bolan’ny Faritra. Tohizana izany fandraisan’ny eny amin’ny Faritra ny Conférence budgétaire izany ary ny Faritra Androy sy ny Faritra Anosy no handray izany fivoriana izany amin’ity herinandro ity.
Mahakasika ireo Faritra 22, Governora miisa 21 (iraika amby roapolo) no efa voatendry hitantana ireo faritra ireo. Tsy ho ela intsony ny fanendrena ny Governoran’ny Faritra Betsiboka.
Ankoatr’izany dia famatsiam-bola hanatanterahana foto-drafitr’asa (subvention d’investissement) mitentina 2 milliards Ar (roa arivo tapitrisa ariary) no nomena ny Faritra tsirairay. Fanampiana ara-bola ho fampandehan-draharaha (subvention de fonctionnement) mitentina 210 millions Ar (folo sy roanjato tapitrisa ariary) isan-taona no nomena ny Faritra tsirairay.
Nomena fanampiana ara-pitaovana ihany koa ny Faritra tsirairay izay ahitana bulldozer, compacteur, chargeur sur pneus, nivelleuse ary camion arroseur. Izany fampitaovana izany dia mba ahafahan’ireo Faritra tsirairay manamboatra làlana ao aminy ka fanamby napetraka amin’izany ny ahavitana làlana 250 km isan-taona.
Ankoatra ireo, isaky ny distrika, dia nomena famatsiam-bola amin’ny alalan’ny Crédit d’Investissement pour l’Appui au Développement (CIAD), ka miankina amin’ny isan’ny Solombavambahoaka eo amin’ilay distrika ny tetiny, izay 250 millions Ar (dimampolo sy roanjato tapitrisa ariary) isaky ny solombavambahoaka, ary nampitomboina ho 500 millions Ar (dimanjato tapitrisa ariary) raha anankiroa.
Mahakasika ireo Kaominina, mitohy hatrany ny fanampiana ara-bola sy ara-teknika ho azy ireo (1.695 ny isany). Ny kaominina tsirairay dia nomena fanampiana ara-bola :
Fanampiana ho fampandehanan-draharaha (subvention de fonctionnement) mitentina 25 millions Ar (dimy amby roapolo tapitrisa ariary) raha 15 millions Ar (dimy ambin’ny folo tapitrisa ariary) teo aloha;
Hisy ihany koa ny tetibola fanampiny « subventions complémentaires » ho an’ireo kaominina manana mponina mihoatra ny 5.000 (dimy arivo);
Tohizina ny famatsiam-bola hanatanterahana fotodrafitrasa (subventions d’investissement) tohanan’ny Banque Mondiale amin’ny alalan’ny Tetik’asa PAPSP : 30 millions Ar (telopolo tapitrisa Ariary) isaky ny kaominina;
Tohizina ny fandoavana ny latsakemboka (cotisation) CNaPS tsy voaloa teny amin’ny kaominina (arriérés de cotisations sociales).
Manamaivana ny vesatra ho an’ny ny tetibolan’ny Kaominina ny fandoavan’ny Fanjakana ireny latsakemboka tsy voaloa ireny ary koa ahafahan’ny mpiasan’ny kaominina misitraka ny zony.
Ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka dia manampy ireo vondrombahoakam-paritra amin’ny fanorenana fotodrafitrasa, toy ny sekoly, lalana, tsena, ary famatsian-drano.
Mbola asa mitohy ny fananganana na ny fanavaozana ny fotodrafitrasa izay efa natomboka tamin’ny taona 2020 :
Biraon’ny kaominina andrenivohitra miaraka amina toerampidiovana miisa 15 (dimy amby folo) ao Ambatolampy, Ambatomainty, Ambilobe, Amboasary, Ampanihy, Bekily, Ivohibe, Maevatanana, Mahabo, Mahanoro, Mampikony, Mananjary, Mandritsara, Midongy atsimo, ary Morombe;
Biraon’ny kaominina ambanivohitra miisa telopolo (30) ;
Biraom-paritry ny BNGRC any Mahajanga sy Toamasina I;
Birao ho an’ny distrika miisa sivy dia : Vohipeno, Mandritsara, Anjozorobe, Antanambao Manampotsy, Soavinandriana, Ankazobe, Préfecture de Police d’Antananarivo;
Trano fiasana sady toeram-ponenana ho an’ny Préfets sy ny Lehiben’ny Distrika miisa 12 any Ambatondrazaka, Ambositra, Antsirabe I, Antsiranana I, Fianarantsoa, Manakara, Mananjary, Morondava, Nosy be, Sainte-Marie, Toliara II, Tsiroanomandidy;
Tranompokonolona ao Iakora;
Tsena manarapenitra ao Ampanefena, Vohémar.
Distrika miisa 9 (sivy) no efa nisitraka ny fanombohan`ny fanamboarana ny Fiadidim-paritra misahana ny Asa, Fampananan’asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy dia ao Ambositra, Taolagnaro, Maevatanana, Miarinarivo, Fianarantsoa, Ambovombe, Manakara, Morondava ary Sambava. Ny asa dia kasaina ho vitaina amin’ity taona 2021 ity.
Mba hirosoana amin’ny fitondrana tsara tantana dia tsy maintsy napetraka ireo rindran-damina ireo. Tsy misy fampandrosoana raha tsy milamina ny tany.
3- Filaminana sy Fandriampahalemana
Niarahantsika nahita ny ezaka rehetra efa notanterahina tamin’ny fanatsarana sy ny fanavaozana ireo rafi-pitantanana teo anivon’ ny Tafika Malagasy, ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena. Tao anatin’izany ny fampitaovana sy ny fananganana fotodrafitr’asa vaovao sy toby ho an’ny miaramila, zandary ary polisy.
Nitohy hatrany izany asa rehetra izany na dia tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana aza ny firenentsika satria tanjona lehibe no napetraka, dia ny famerenana ny fahefam-panjakana sy ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana.
3.1. Tafika Malagasy
Niroso hatrany isika teo amin’ny fametrahana na ny fotodrafitrasa na ny rafi-pibaikoana mifanaraka amin’ny tetika novolavolaina iatrehana ny tsy fandriampahalemana sy ny fiarovana ny Firenena.
Tafajoro ny 11 mars 2020 ny Etamazaoro Iraisan’ny Tafika (Etat Major des Armées) sy ireo Etamazaoro ny Antoko Tafika 3 (telo) dia ireto avy : Etamazaoro ny Tafika An-Tanety, Etamazaoro ny Tafika An-Habakabaka, Etamazaoro ny Tafika An-dRanomasina.
Napetraka nanomboka ny 9 desambra 2020 ireo Faritra Fiarovana sy Fampandriam-pahalemana 10 (folo) (Zone de Défense et de Sécurité) dia : Ankarana, Ankarafantsika, Tsiribihina, Tsiafajavona, Ikopa, Pangalanes, Andringitra, Fiherenana, Matitanana ary Mandrare. Efa voatendry avokoa ireo Komandin’ireo ZDS ireo amin’izao fotoana izao.
Hapetraka ihany koa ireo Mpiadidy Miaramila isam-Paritra (Délégué Militaire Régional).
Ao anatin’ny fanitsiana ny rafitra dia natsangana ny « Premier Bataillon Parachutiste » ny 6 janoary 2021 izay nanolo ny « Premier Régiment des Forces d’intervention (1er RFI) teo aloha. Natsangana ihany koa ny Deuxième Bataillon d’Infanterie de Marine (2ème BIMA) ny 6 janoary 2021 any Antsiranana izay nanolo ny Deuxième Régiment des Forces d’Intervention (2ème RFI) teo aloha. Efa nitsangana ny Groupement des Forces Spéciales d’Intervention (GFSI) ny 10 febroary 2021. Efa natsangana ny 27 janoary 2021 ihany koa ny Base Aérienne 213 izay nivondronan’ny Base Aéronavale d’Ivato sy ny Base Aérienne Tactique d’Arivonimamo.
Farany, notontosaina ny firaketana an-tsoratra sy fitsarana miaramila ireo zatovo lahy sy vavy 18 taona ka hatramin’ny 31 taona manerana ny nosy izay mizaka ny zom-pirenena Malagasy izay miisa 226.254 ary mitsinjara toy izao lahy 111.106, vavy 115.148.
Nandray anjara feno tamin’ny famonjena ireo vahoaka traboina noho ny tondra-drano ny fiandohan’ny taona 2020 ny tafika malagasy ka nampiasaina tamin’izany ny fitaovana rehetra toy ny helicoptère, lakana sy fiara tsy mataho-dalana.
Teo amin’ny ady amin’ny asan-dahalo eny ambanivohitra dia omby 4.222 (roa amby roapolo sy roanjato sy efatra arivo) no tafaverina teo amin’ireo omby 7.732 (roa amby telopolo sy fitonjato sy fito arivo) very niantsoana ny tafika, dahalo 126 (enina amby roapolo amby zato) no tratra, basy 114 (efatra amby folo amby zato) no notazonina ary fahana (munitions) 139 (sivy amby telopolo amby zato).
Eo amin’ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana dia toy izao ireo ezaka natao :
Faritra Ambanivohitra mitaky fandriampahalemana maika (Zones Rurales Prioritaires de Sécurité na ZRPS) miisa 4 (efatra), izay efa iarahantsika mahita ny vokatry ny asan’izy ireny
Toby miisa dimy no naorintsika ho an’ireo Beholafy Mpiaro Atomotra (Base Opérationnelle Avancée – BOA) any Tsaratanana, Iakora, Morafenobe, Ambatofinandrahana ary Ankilizato. Efa nanomboka ny fitokanana ireo toby rehetra ireo isika ankehitriny
BOA miisa dimy hafa kosa no eo an-dalam-panorenana, dia ny any Ankazoabo Atsimo, Miandrivazo, Isandra, Andriry Betroka ary Kandreho
Andiany Mpiaro Manokana (Détachement Spécial de Sécurité – DSS) miisa efatra no efa vita tanteraka ao Vondrozo, Amboasary-Atsimo, Befotaka ary Ambohimahasoa
Ezahina kosa ny hamitana ny DSS ao Mitsinjo, Soalala, Vangaindrano, Anjozorobe, Mandritsara ary ny ao Vohipeno
Fanamboarana Famaharana Fototra (Base réduite) ao Mananjary sy Farafangana
Hisy ihany koa ny fampitaovana maro isan-karazany ho an’ny Tafika Malagasy sy ny fanatsarana ary fanarenana fotodrafitrasa maro manerana ny Nosy.
Raha ny taona 2020 no resahana dia azo singanina manokana ireto vokatra ireto:
Fandravana ny tambazotran’ireo andian-jiolahy mpanao fakana an-keriny sy ireo mpiray petsapetsa aminy izay nokarohina hatramin’ny ela ary koa ireo dahalo nampihorohoro tamin’ny faritra maro raha tsy hilaza afa-tsy ny tany Tsaratanana, Mahazoarivo Isandra, Anjozorobe
Nahitana fihenany 24% (efatra amby roapolo isan-jato) ny asan-jiolahy, 9% (sivy isan-jato) ny fandrobana mitam-piadiana sy fanakanan-dalana amin’ny faritra maro manerana ny Nosy
Taolam-paty maherin’ny 400 (efa-jato) kilao no sarona nandritra ny taona 2020. 87 (fito amby valompolo) ny olona voasambotra
Maherin’ny 46.403 kilao ny zava-mahadomelina tratra ankoatra ireo fambolena nopotehina. 380 ny olona voasambotra
Nisy fihenany 21% ny tahan’ny trangana halatr’omby tamin’ny taona 2020, raha nihena 55% ny isan’ny omby very ary niakatra 66% ny taona 2020 kosa ny tahan’ny famerenana ireo omby
Basy tsy ara-dalana fito ambin’ny sivifolo sy telon-jato sy arivo (1.397) no azo nanerana ny faritra maro ka ny 106 (enina ambin’ny zato) tamin’ireo dia basy mahery vaika avokoa niaraka tamin’ny bala miisa 428 (valo amby roapolo sy efajato).
Eo amin’ny fotodrafitrasa sy fampitaovana dia izao no azo ambara:
Vondro-Tobi-Paritra (Compagnie de Gendarmerie): Voatsangana ny ao Ikalamavony sy Amboasary Atsimo ary efa miasa ny ao Iakora. Hatsangana amin’ity taona ity ny any Befandriana Avaratra sy Amparafaravola
Toby Fanantevenam-Panazarana Manokana (Centre Spécial d‘Aguerrissement Opérationnel – CSAO): efa voatsangana ny any Malaimbandy Mahabo, Beroroha, Beravina Morafenobe, Ranotsara Atsimo, ary Imanombo Ambovombe. Eo am-pamaranana ny fotodrafitr’asa CSAO roa dia any Andriamena Tsaratanana ary Andimaka-Manambolo Belo-sur-Tsiribihina. Ary efa amperin’asa ny ao Maromby Amboasary Atsimo
Tobim-paritra na Brigades miisa fito no eo am-pananganana amin’izao fotoana izao dia ireto avy: Mahazoarivo Isandra, Marolinta Beloha, Androka Ampanihy, Tranomaro Amboasary, Maroalimainty Ambovombe, Ikopoky Beloha, Talata Vohimena Manandriana
Tafapetraka ny Tobim-paritra manaramaso ny Ranomasina (Postes de surveillance nautique) roa ao Tanjona Mananara Avaratra sy Manantenina Taolagnaro
Efa an-dàlam-pahavitàna ny Sakelika Manokana ny Lalana na BRS (Brigade Routière Spéciale) ao Kiangara Ankazobe, RN 4, mameno ho efatra ireo eny anivon’ny Faritra Fialan-tsasatra Voaaro (Aire de repos sécurisée) ao Sahamamy RN2 Brickaville, Ambalamanakana Ambositra RN7 ary Analakininina RN34 Miandrivazo
Hatsangana toy izany koa ny Ivotoeram-pirenena Fanazarana Manokana CNESGN (Centre National d’Entrainement Spécifique) ao Ambatolampy
Niampy ihany koa ireo fitaovana nomena ny zandarimariam-pirenena: (i) Lakana haingam-pandeha (vedette) 3 (telo) no natolotra ireo pelotons de surveillance côtière any amin’ny faritra SAVA, Analanjirofo ary Anosy, (2) Motos miisa 47 no naparitaka manerana ny Nosy
Camion miisa 8 (valo) no natolotra ny zandarimaria ho fanatanterahana ny asa ary nentina nanampiana fitaomana rano any amin’ny faritra atsimo ireo fitaovam-pitaterana ireo noho ny fisian’ny hain-tany niseho tany.
Teo anivon’ny Polisim-pirenena dia ireto no singanina tamin’ny vokatra azo:
Eo amin’ny asan-jiolahy, fikambanan-jiolahy 93 (telo amby sivy folo) no rava. Tranga fakana ankeriny miisa 5 (dimy) no voavahy sy voarava
Eo amin’ny halatr’omby, raharaha 132 (roa amby telopolo amby zato) no natrehina ka tafaverina ny omby 565 (dimy amby enimpolo sy dimanjato tamin’ireo 868 (valo amby enimpolo sy valonjato) very, dahalo 62 (roa amby enimpolo) no voasambotra
Basy azo 79 (sivy amby fitopolo) ka ny 34 (efatra amby telopolo) naverin’ireo dahalo taloha tao Isandra ary ny 45 (dimy amby efapolo) tratran’ireo sampandraharaha ny Polisim-pirenena miady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana
Raharaha halatra taolam-paty miisa 19 (sivy amby folo) no noadihadihana tany Antalaha, Taolagnaro ary Betafo. Taolam-paty 44 kilao (efatra amby efapolo kilao) no azo
Rongony 10.045 kg (enina amby efapolo sy iray alina kilao) lasaka 26 (enina amby roapolo) ary fonosana 217 (fito ambifolo sy raojato) no tratra
Bolabolan’Andramena 87 (fito amby valopolo) tratra tao Amparafaravola
Volamena 2,746 kilao (roa faingo enina amby efapolo sy fitonjato) no tratry ny Polisy mpiandry sisin-tany tao Nosy Be
Raharaha mikasika ny fandikan-dalàna eo amin’ny haitao ara-kajy mirindra (cybercriminalité) 128 (valo amby roapolo amby zato) no voavahy.
Ireo ny vita hatreto sy ny vokatra azo. Na dia izany aza dia mbola milofo ny mpitandro filaminana hamerina hatrany ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amintsika.
Efa vita tanteraka na eo am-pamaranana ny asa fanorenana ny toeram-piasan’ireto Foibe-paritry ny Filaminam-bahoaka sy trano fonenana ho an’ny tompondrakitra ao amin’ny faritra ireto : Ihorombe, Sofia, Betsiboka, Bongolava, Vakinankaratra, Anosy, Vatovavy Fitovinany
Ny biraon’ny Fitaleavam-paritry ny Filaminam-bahoaka sy trano fonenana ho an’ny tompondrakitra miisa folo no natomboka ao Ihosy, Maevatanana, Tsiroanomandidy, Antsirabe, Taolagnaro, Manakara, Ambositra, Antsohihy, Farafangana ary Fenoarivo Atsinanana. Efa miasa tanteraka ny enina ary mamarana asa ny efatra
Vita ary efa miasa ny Kaomisarian’ny Polisy vaovao 2 (roa) ao Ambohimahasoa sy Vondrozo
Mitohy ny fananganana komisaria amin’ireto toerana ireto ireto : Midongy Atsimo, Befotaka Atsimo, Beloha, Manja, Andramasina, Toliara 2, Benenitra, Marolambo, Toamasina 2, Kandreho, Mahajanga 2, Isandra, Ikalamavony
Atomboka amin’ity taona ity ny fananganana komisaria amin’ireto distrika ireto : Iakora, Vohibato, Fenoarivobe, Anivorano Avaratra, Brickaville, Beroroha, Anjozorobe, Ifanadiana, Sainte-Marie, Lalangina, Manja, Bekily, Betroka, Antsirabe II, Ambato-Boeny, Tsihombe, Nosy Varika, Betafo, Betioky, Befandriana Avaratra, Anosibe an’Ala, Antanambao Manampotsy, Mitsinjo, Ambohidratrimo
Nahazo tombony manokana ny avy amin’ny polisim-pirenena tamin’ny fahazoana ireo fiara tsy mataho-dàlana miisa 34 sy motos Gascar miisa zato ary moto hafa miisa 264
Hatsangana ny Foibe-Paritra ny Polisim-pirenena DRSP amin’ny renivohi-paritra roa ambin’ny folo mbola tsy manana dia ny ao Ambovombe, Sambava, Morondava, Ambatondrazaka, Maintirano, Miarinarivo, Antananarivo, Toamasina, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga ary Antsiranana.
Nazahoam-bokatra ireo ezaka ireo izay notanterahan’ny mpisehatra rehetra eo amin’ny lafin’ny fandriampahalemana, anisan’ny fepetra ahafahana mamokatra anaty fitoniana
4- Ny lafin’ny Toe-karena sy ny Fotodrafitrasam-pamokarana
4.1. Eo amin’ny tontolon’ny toe-karena
Raha ny vinavina ara-toe-karena amin’ity taona 2021 ity dia mbola misy fiantraikany goavana amin’ny firenentsika ny valanaretina izay mahazo ny eran-tany. Mbola ambany dia ambany ny tinady eo amin’ny tsena eran-tany ary tsy mbola afaka mivelatra ny fandraharahana sy ny famatsiam-bola avy amin’ny sehatra tsy miankina nohon’ny fisian’ny fisalasalana (incertitude) maro samihafa.
Raha ny eto Madagasikara no resahana, nohon’ny fiverenan’ ny valanaretina fanindroany nanomboka tamin’ny volana martsa tamin’ity taona ity dia nofaritana ho +4,3% amin’izao fotoana izao ny fiakaran’ny harikarena faobe raha -5% (miiba) eo ho eo izy tamin’ny taon-dasa.
Ezahana ny hitazomana ho 6,2% ny sondrom-bidim-piainana amin’ity taona 2021 ity. Ny fitànana ny volantsika Ariary ho marin-toerana dia ny fitsinjovana ny fanomezana aina indray ny toe-karena eto amintsika na relance économique.
Raha 9,8% ny tahan’ny famorian-ketra (pression fiscale) tamin’ny taon-dasa dia 11,4% no tanjona amin’ity taona 2021 ity. Ny tsy fifandanjan’ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ny teti-bolam-panjakana ankapobeny dia -6,5% amin’ity taona 2021 ity. Ny politika ara-bola sy ara-pitantanam-bola amin’ity taona 2021 ity dia natao hifantoka amin’ny fitsinjovana ny fomba mahomby ampiainana indray ny toe-karena eto amintsika ka hiteraka asa sy vola miditra ho an’ny orinasa, ho an’ny mpandraharaha ary ho an’ny tanora amin’ny fampiasam-bola eo amin’ny seha-pihariana marobe amin’ny alalan’ny tetikasa sy ny programan’asam-panjakana.
4.2. Eo amin’ny fanatsarana ny asam-pitantanam-bola
Vita tanteraka ny fananganana sy ny fampitaovana ny tranoben’ny Hôtel des finances ao Sambava. Eo am-pananganana ny Hôtels des finances isika amin’izao fotoana izao ao Antsiranana, ao Mahajanga, ao Fianarantsoa, ao Taolagnaro ary ao Toliara.
Nohatsaraina ny toeram-piasan’ny Direction Générale du Trésor teto Antananarivo-Renivohitra.
4.3. Eo amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany
Mahakasika ny fehezan-dàlana momba ny harena ankibon’ny tany dia mitohy hatrany ny dinika eo amin’ny fanjakana sy ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny lafin’ny fihariana harena ankibon’ny tany eto amintsika.
Mba hiadiana amin’ny fanondranana an-tsosokosoko ny harem-pirenena any ivelany, tsy ho ela dia hovatsiana fitaovana fitiliana volamena ari-fomba eny amin’ny seranam-piaramanidin’i Antananarivo, Nosy be ary Toamasina.
Tafatsangana na andalam-panamboarana ny Biraompanjakana momba ny harena an-kibon’ny tany na Bureau d’Administration Minière (BAM) any Miandrivazo, Tsiroanomandidy, Vohémar, Antsohihy ary Mananjary. Izany dia natao mba hafahana mifehy tsara ny fitantanana ny sehatry ny harena ankibon’ny tany. Ho tohizana any amin’ny Distrika 5 (dimy) ny fananganana BAM dia Nosy be, Fenoarivo-Atsinanana, Ambositra, Ambovobe, Maintirano.
Nahorina any Antsirabe ihany koa ny Trano iombonana (Atelier Communautaire) izay toerana fanefena vatosoa.
4.4. Eo amin’ny sehatry ny Fitaterana
Maro ny ezaka hiatrehana ny fanamby hanarenana ny sehatry ny fitaterana nohon’ny fiantraikan’ny krizy ara-pahasalamana eto amintsika.
Mahakasika ny fitaterana an-dalamby dia hatsaraina hatrany ny FCE (Fianarantsoa – Cote Est) izay nisitraka lohamasinina telo ary fanavaozana ireo fitaovana efa misy. Nisy ihany koa ireo fanamboarana natao teo amin’ny tobim-piantsonan’ny lamasinina, toy ny tao Fianarantsoa, Manapatrana, Mahabako, Tolongoina ary Fenomby. Ireo ezaka ireo dia nahafahana nampitohy tsy tapaka ny zotra Fianarantsoa-Manakara.
Amin’ity taona 2021 ity dia mbola hanatevina izany fampitaovana izany ny Fanjakana, amin’ny alalan’ny fividianana « wagons » ho an’ny FCE. Hotohizana ihany koa ny fanatsarana ny fiantsonana amin’ny zotran-dalamby FCE ao Sahambavy, Manakara, Fenomby, Sahasinàka ary Tolongoina.
Hirosoana ny fampiasana zotra an-dalamby hitaterana olona eto andrenivohitra amin’ireto zotra roa (2) ireto :
Faritra Atsimo (corridor sud) izay manomboka eo Soarano PK0, mihazo Isotry, Ampefiloha, Soanierana, Ankadimbahoaka, Androndrakely ary mifarana eny Amoronakona PK12, ary efa miatomboka ny asa mahakasika an’io.
Faritra Avaratra (corridor nord) : avy eny Alarobia mihazo an’Ankazomanga ary Soarano.
Eo amin’ny Fitaterana an-tariby dia efa voafaritra ireo làlana andalovan’ity rafi-pitaterana ity. Efa niroso ny asa fanomanana rehetra, toy ny fanentanana sy fampahalalana ny tompon’andraikitra sy ny mponina amin’ny toerana anaovana ny asa, ny fanadihadihana ara-tontolo iainana sy ireo toerana hipetrahan’ny andry hamaharany (pylônes) sy ny fiantsonana.
Ho an’ny Fitaterana an-tanety dia efa vita ny ASSR (aire de stationnement, de sécurité et de repos) ao Ambalamanakana (RN7) sy ao Sahamamy (RN2). Efa eo an-dalam-pamitana ny ASSR dimy isika izao dia ny ao Ambalakinina Miandrivazo (RN34), Lambokely (RN8), Andimaka (RN8), ao Andranovelona Sakay (RN1) sy ao Kiangara (RN4).
Kasaina ihany koa ny fanamboarana ASSR 5 (dimy) hafa amin’ity taona ity amin’ny lalam-pirenena toy ny ao Ranohira (RN7), Ambilobe (RN6), Ifanadiana (RN25), Irondro-Manakara (RN12), Andaingo (RN44).
Eo amin’ny fitaterana an-dranomasina sy andranomamy, vita ny asa fanadiovana sy fanavaozana ny Canal des Pangalanes avy aty Toamasina ka hatrany Mananjary, izay mitondra fanampianaamin’ny fampivelarananyseha-pihariana toy nylavanila,nyharenaan-kibon’ny tany,nyfizahantany,ny fambolena, sns.
Hotohizana amin’ity taona 2021 ny fanatsarana ny fifamoivoizana amin’nyCanaldesPangalanes, ka efa andalam-panantanterahana amin’izao fotoana izao ny ampahany Mananjary – Manakara.
Nisy ihany koa ireo fotodrafitr’asa samihafa izay vita na eo andalam-pahavitana, toy ny fiantsonan’ny botry ao Soalala, ny fanarenana ny seranantsambo ao Maintirano, ny fanatsarana ny seranantsambo Quai Orsini ao Mahajanga, ny asa fanarenana ny seranantsambo ao Antalaha, ny fanorenana ny seranantsambo ao Mananara-Avaratra.
Ny amin’ity taona 2021 ity dia hatao ny asa fanarenana ny seranantsambo ao Analalava, ny serantsambo ao Sainte-Marie ary ny seranantsambo ao Besalampy. Vitaina amin’ity taona ity ny fandinihana ny fanitarana ny seranantsambo ao Toliara sy ny fiantsonana ao Soanierana-Ivongo ary ny Port Ilôt Madame ao Sainte-Marie.
Eo amin’ny fitaterana an’habakabaka dia singanina manokana ny fanaovana sonia fiaraha-miasa amin’ny fitantanana seranam-piaramanidina madinika 8 (valo) dia ny ao Mananara-Avaratra, Antalaha, Vohémar, Morombe, Maintirano, Analalava, Manakara ary Antsirabe.
Natsaraina sy nosokafana ny seranam-piaramanidina ao Amborodia Bekopaka ary ny Isalo Ranohira.
Napetraka ny tunnels désifectants ao amin’ny seranam-piaramanidinina 6 (enina) eto amintsika dia: Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Toliara, Taolagnaro, Sainte-Marie.
4.5. Eo amin’ny sehatry ny fampivelarana ny indostria sy ny varotra
Mitohy ny ezaka mba ho fiarovana ny mpanjifa, indrindra nohon’ny fisian’ny valanaretina teo amin’ny famatsiana ireo entana ilaina andavanandro sy ny mahakasika ny vidin’ireo entana ireo.
Nisesisesy ny fihaonana sy fiaraha-midinika tamin’ireo mpandraharaha matihanina momba ny varotra sy ny fanafarana ireo entana ireo ka niezahana ny niaro ny fahefamividin’ny mpanjifa miatrika ny fikorontananan’ny seha-pamokarana manerantany, raha ny momba ny vary, ny menaka, ny siramamy ary ny lafarinina manokana no resahina.
Mikasika ny lavanilina, dia mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny fitondrampanjakana amin’ny fanamafisana ny fandriampahalemana amin’ity seha-pihariana ity. Heverina fa ho vita mialohan’ny faran’ity taona ity ny “Tranoben’ny lavanilina” izay efa natomboka ny fananganana azy ao Antalaha. Nohavaozina tamin’ny volana May lasa teo ny lalàna mifehy ny Filankevitra Nasionaly momba ny Lavanilina mba hametrahana ny dinika eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina toy ny mpamokatra, mpanangom-bokatra ary mpanondrana lavanilina amin’ny faritra sivy mpamokatra eto amintsika.
Momba ny tetik’asa ODOF “One District, One Factory”, dia efa vonona ankehitriny ireo pitsopitson’ny taratasy fandraharahana mahakasika distrika miisa 30 ka tsy ho ela dia hiroso amin’ny fametrahana izany isika mba hananganana orinasa mpanodina vokatra mifanaraka amin’ny zava-misy eny anivon’ny distrika isanisany.
4.6. Eo amin’ny sehatry ny tontolo Ambanivohitra
Ankoatra ireo asa maro efa vita ny taona 2019, dia maro koa ny ezaka natao mba hanatsarana ny tontolo ambanivohitra nandritra ny taona 2020 ka hatramin’izao.
Eo amin’ny sehatry ny fambolena manokana, velaran-tany voatondraka ho fanitarana maherin’ny 37.047 hektara (fito arivo sy telo alina hektara) no vita tamin’ny taona 2020. Ireto avy ny faritra nahitana izany asa izany:
Faritra Alaotra Mangoro : Distrika Ambatondrazaka ao Ambohitromby, Distrika Amparafaravola ao Ambohimandroso, Imamba, Ivakaka ary PC 23, Distrika Andilamena ao Vodivato
Faritra Amoron’i Mania : Distrika Ambatofinandrahana ao Ambodiriana, Ivary, Andohariana, Tsinjorano, Vohidahy, Belavenona, Ambararatasarotra, Antsosa sy Ambondromisotra, Distrika Ambositra ao Ilaka Afovoany, Andohariana sy Analalehibe, Distrika Fandriana ao Tsarazaza
Faritra Analamanga : Distrika Ambohidratrimo ao Ambohimanjaka Andrefanitsarahoray, Ambohipihaonana, Ambohitrinilahy, Distrika Andramasina ao Amberobe, Antsiho sy Tankafatra, Distrika Anjozorobe ao Ampilanonana, Antsorindrana, Betsimizara, Mangamila sy Antatamokely, Distrika Antananarivo Avaradrano ao Ambohidrazana sy Ampahimasina, Distrika Antananarivo Atsimondrano ao Ambalavao, Distrika Manjakandriana ao Andranonanjakana
Faritra Analanjirofo : Distrika Fenoarivo Atsinanana ao Androka, Saharamy, Amparihibe Mahatsara, Ankidoba, Ambodirofia, Angorokobe, Marohelitra, Mandanitaoka, Ambodiaviavy, Masiakamalona, Vohilengo, Maroaomby, Ambodimanga II sy Manakambahiny, Distrika Maroantsetra ao Ankofabe, Distrika Vavatenina ao Iazafo, Ampasimazava, Maromitety, Kaloandapa, Sahanimanga, Maintimbato, Lanary, Mahatsara sy Verezambola
Faritra Androy : Distrika Bekily ao Bekitro, Beraketa Menakompy sy Tsikolaky, Distrika Ambovombe ao Imanombo Finday
Faritra Anosy : Distrika Amboasary Atsimo ao Tsivory, Maniry sy Tsimanangy, Distrika Betroka ao Naninora Anteto
Faritra Atsimo Andrefana : Distrika Betioky Atsimo ao Mangily sy Taheza, Distrika Morombe ao Tanandava
Faritra Betsiboka : Distrika Maevatanana ao Ambalanjanakomby Kariera
Faritra Boeny : Distrika Mahajanga II ao Bealoy, Ankaboka, Marosakoa sy Antanamivony, Distrika Soalala ao Antsakoamileka
Faritra Bongolava : Distrika Tsiroanomandidy ao Andohananalamalotra
Faritra Diana : Distrika Ambanja ao Ampondrabe, Ankaraignabe sy Antsakoamanondro, Distrika Ambilobe ao Mahavavy, Distrika Antsiranana II ao Mahalina sy Tanamandriry
Faritra Ihorombe : Distrika Iakora ao Anarabe, Nosiarivo, Ranotsara Avaratra, Tsaravatsy Ivory, Distrika Ihosy ao Analalaliry, Andriabe, Andrera, Ambahibe, Distrika Ivohibe ao Ankazovinelo, Antokila, Ambatomalama sy Amboza
Faritra Itasy : Distrika Arivonimamo ao Tsarafara, Ambohitrakanga, Avarabary, Distrika Miarinarivo ao Loholoko
Faritra Matsiatra Ambony : Distrika Fianarantsoa ao Ankitsika, Anasana sy Ankaraoka, Distrika Isandra ao Andoharanomaintso, Distrika Vohibato ao Ampahidranolava
Faritra Melaky : Distrika Antsalova ao Beboka sy Bekopaka, Distrika Maintirano ao Demoka sy Marifilaly
Faritra Menabe : Distrika Belo-sur-Tsiribihina ao Tsaraotàna, Distrika Manja ao Ambararata sy Vondrove, Distrika Morondava ao Dabara sy Bemanonga
Faritra Sava : Distrika Andapa ao Ambalafary, Kobahina, Ambodiala sy Andalamena, Distrika Vohémar ao Belambo Ambony
Faritra Sofia : Distrika Antsohihy ao Anahidrano, Distrika Bealalana ao Andranomafana sy Anjohibe
Faritra Vakinankaratra : Distrika Antsirabe II ao Andriampatsy, Distrika Betafo ao Ambodiriana, Distrika Faratsiho ao Vinaniony Atsimo sy Ambohijatovo
Faritra Vatovavy Fito vinany: Distrika Manakara ao Nofia, Distrika Mananjary ao Marofototra.
Lakan-drano fanondrahana mirefy 2.161 km (iraika amby enimpolo amby zato sy roa arivo kilometatra) no namboarina sy navaozina ao amin’ny Faritra miisa 17 maneran’ny nosy.
Raha ny fiompiana kosa dia samy nanaovana ezaka amin’ny Distrika maro manerana ny Nosy ka ireto avy izy ireo:
Abattoir manara-penitra iray ao Tsiroanomandidy Faritra Bongolava no natsangana
Fiompiana omby fakana hena fitaratra telo no naorina tao Toamasina, Tsiroanomandidy sy Taolagnaro, ary toerana fiompiana omby manarapenitra (fermes modernes et fermes franchisées) enina tao Antsirabe II sy Betafo
Omby mihoatra ny 2.400 (efajato sy roa arivo) no nametrahana marika voaaradia (puces géolocalisables) mba hiarovana andian’omby miisa eo amin’ny 250 000 (dimy alina sy roa hetsy) ao Bongolava sy Menabe
Omby miisa 1.000 (arivo) no nametrahana kavin’omby tsy azo angalarina (boucle d’identification infalsifiable) tao amin’ny Distrika Taolagnaro, Bekily, Ambovombe, Tsihombe ary Morondava
Nametrahana fanotrehana akoho mandeha amin’ny herin’aratra ary mahazaka atody 840 (efapolo sy valonjato) avy ireto Distrika ireto : Ambohidratrimo, Antsiranana, Tsiroanomandidy, Mahajanga, Toamasina I sy Toamasina II
Ondry aman’osy mihoatra ny 22.000 (roa arivo sy roa alina) no nozaraina tamin’ny 2020 ka nahitana ondry aman’osy fakana taranaka miisa 5.800 (valonjato sy dimy arivo) izay nozaraina tao amin’ireto Distrika ireto : Toliara I, Toliara II, Betioky, Ampanihy, Benenitra, Beroroha, Ankazoabo, Morombe, Sakaraha , Mahabo
Akoho fakana nofo sy manatody lava mihoatra ny 70.000 (fito alina) no nozaraina tamin’ny mpiompy tao amin’ny Distrika Ihosy, Sambava, Antalaha, Vohimarina, Andapa ary Antsirabe I.
Raha ny teo amin’ny sehatry ny jono indray dia izao no azo ambara:
Fanavaozana momba ny jono makamba an-tsisin-dranomasina mba ho tonga sehatra mitsinjo ny lovainjafy sy mampidi-bola ha an’ny fanjakana
Fanokafana ny dinika mba hametrahana ny fifanarahana momba ny jono eo amin’i Madagasikara sy ny Vondrona Eropeanina ho amin’ny efa-taona manaraka
Zana-trondro miisa 13.900.000 (sivy hetsy sy telo amby folo tapitrisa) no voazara tamin’ny mpiompy amin’ny faritra 12 (roa amby folo) : Atsinanana, Atsimo Andrefana, Betsiboka, Ihorombe, SAVA, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Boeny, Bongolava ary Analamanga
Fahazoan-dalana amin’ny jono vaventy miisa 242 (roa amby efapolo sy roanjato) no nomena
Fitaovana miisa 1.800 (valon-jato sy arivo) toy ny salotr’aina, harato, sambo madinika aingam-pandeha no nozaraina tao Lalangina, Ihosy, Vohibato, Isandra, Ikalamavony, Fianarantsoa, Ambalavao, Ambohimahasoa, Toliara II, Manakara, Taolagnaro, Farafangana, Vangaindrano, Maevatanana, Antsirabe, Betafo ary Belo-sur-Tsiribihina
Ireto kosa ny asa atomboka na tohizana amin’ity taona 2021 ity:
Momba ny fambolena, dia fanarenana velarantany voatondraka mahatratra 50.665 ha no vinavinaina, miampy fanitarana 20.850 ha vaovao. Mirefy 374 kilometatra ny lakan-drano kasaina haorina na havaozina amin’ity taona ity
Fanarenana lalantany eny anivon’ny kaominina maro ahafahana mampifandray ny toeram-pamokarana sy ny tsena ka anisan’izay hisitraka izany ireto distrika ireto : Brickaville, Mananara Avaratra, Sainte Marie, Vatomandry, Arivonimamo,
Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Fenoarivo Atsinanana, Manjakandriana, Miarinarivo, Soavinanadriana, Soanierana Ivongo, Toamasina II, Vavatenina, Faratsiho ary Arivonimamo
Fametrahana any Maroantsetra sy Nosy Be ny rantsan’ny Foibe fanaraha-maso ny jono (CSP) sy fampitaovana sambo mpanaramaso ny jono azy ireo
Fananganana sekoly ambaratonga faharoa momba ny fiompiana (lycée agricole) ao Miarinavaratra, Fandriana
Fametrahana fotodrafitrasa madinika momba ny jono izay ahitana ihany koa ny fampiasana herinaratra mahaleotena any Ambanja, Ambilobe ary Nosy Be
Fa omby maherin’ny valo arivo sy dimy alina (58 000) no ezahana asiana marika voaradia na puces éléctroniques ary maherin’ny 450.600 no asiana kavina elektronika.
4.7. Eo amin’ny sehatry ny tontolo iainana
Natao laharam-pahamehana ny fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ary ny fitantanana lovain-jafy sy ara-drariny ireo harena voajanahary toy ny biby sy zava-maniry miavaka izay tsy misy afa tsy eto amintsika.Efa napetraka ny rindran-tontolo iainana maitso ka ny paik’ady voalohany nentina tamin’izany dia ny fambolen-kazo sy fampitomboana ireo velaran-tany voarakotra ala.
Napetraka tanjona tamin’ny taona 2020 ny hambolena ala afaritra amin’ny velaran-tany mirefy 76.168 hektara. Na dia teo aza anefa ny fotoan-tsarotra nandritra ny fisedrana ny valanaretina dia velaran-tany mirefy 59.639 ha (sivy amby telopolo sy eninjato sy sivy arivo sy dimy alina hektara) no voavoly hazo.
Araka ny paik’ady napetraka dia hanatanteraka fambolen-kazo moderna amin’ny velaran-tany midadasika isika amin’ny alalan’ny famafazana ambioka an’abakabaka. Hampiasa ireo teknolojia isan’ny hiaka farany isika amin’ny alalan’ny drones, efa voavidy ireo “drônes” dimy ary efa niroso tamin’ny fanofanana ireo teknisianina mpikirakira ny fitaovana ary efa nanatanteraka ny andrana voalohany.
Hahita vokatra tsara isika satria hahazo tombony eo amin’ny lafiny fotoana, fomba fambolena ary amin’ny fanatratrarana ireo toerana saro-dalana sy mikisilasila.
Mbola ao anatin’ny Vina « Madagasikara rakotr’ala » dia nohamafisina ny fametrahana toeram-pamokarana zanakazo (Pépinière) manerana ny nosy. Ankehitriny dia ahitana toeram-pamokarana zanakazo miisa 1.700 (fitonjato sy arivo) ny Faritra 22 (roa amby roapolo).
Nataon’ny Fitondram-panjakana ho laharam-pahamehana ihany koa ny fanomezan-danja ny toe-karena maitso sy ny toe-karena mifampitsinjo (économie verte, économie circulaire). Izany indrindra no nanatanterahana tetik’asa fitsinjarana sy fanodinana fako ho lasa angovo na akora hafa ilaina amin’ny fiainana an-davan’andro toy ny harina, zezika compost, mba hampihenana ny fandotoana ny tontolo iainana. Hisitraka izany ny Distrikan’i Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Avaradrano, Toamasina I, Antsiranana I. Efa an-dalam-pananganana ireo foto-drafitrasa mifandraika amin’izany isika amin’izao fotoana izao.
Natao koa ny fanentanana sy fampianarana mikasika ny ady sy ny fiarovana amin’ny doro-tanety sy ny doro-ala (feu de brousse, feu de forêt) teny amin’ny faritra miisa 17 ary efa eo an-dalam-pandrindrana ny an’ireo faritra ambiny ankehitriny.
Fikambanana maro mitolona sy miady amin’ny afo, doro-tanety sy doro-ala koa no nomena andraikitra sy novatsiana fanamiana ary fitaovana. Distrika dimy no hisitraka izany: Mahajanga II, Morondava, Vohémar, Morombe, Antananarivo Renivohitra.
Ho tohizana any amin’ny Distrika Antananarivo Atsimondrano koa ny tetikasa fanodinana ny fako hasolo arina.
Ho fanamafisana ny ezaka eo amin’ny lafiny Tontolo iainana dia efa tafapetraka ny Ivo-toeram-panofanana nasionaly ireo teknisianin’ny Ala (Centre National de Formation des Techniciens Forestiers CNFTF) eny Angavokely Carion izay mampihofana mpianatra ho Mpiasan’ny ala. Efa nivoaka tamin’ny taona 2020 ireo andiany voalohany miisa 25 (dimy amby roapolo) ary efa nahazo fanendrena ara-panjakana ka naparitaka avy hatrany manerana ny faritra.
4.8. Eo amin’ny lafin’ny Asa vaventy sy ny Fanajariana ny tany ary ny trano fonenana sy ny famoronana tanàna vaovao
Na dia teo aza ny fiantraikan’ny valanaretina, tsy nahasakana ny fanatanterahana ireo fandaharan’asam-panjakana nampiandraiketana azy ny fitondram-panjakana izany ka toy izao ny vokatra azo aroso eo amin’ny sehatry ny Asa vaventy:
Làlana manodidina ny 14.300 km no voakasiky ny fikojakojana, fanarenana na fanorenana mba ho azo ampiasaina manerana ny Distrika rehetra eto Madagasikara, toa Antananarivo Renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Toamasina II, Fenoarivo Atsinanana, Soanierana Ivongo, Ambilobe, Ambatolampy, Antsirabe I, Antsirabe II, Ambositra, Ambohimahasoa, Fianarantsoa I, Fianarantsoa II, Ambalavao, Ihosy, Sakaraha, Toliara I, Toliara II, Manjakandriana, Moramanga, Brickaville, Taolagnaro, Amboasary, Ambovombe, Farafangana, Vangaindrano, Manakara, Ambatondrazaka, Amparafaravola, Mitsinjo, Soalala, Befandriana, Tsiroanomandidy, Miarinarivo, Anjozorobe, Soavinandriana, Faratsiho, Ambilobe, Vohemar, Sambava, Maevatanana, Manja, Morombe, Miandrivazo, Mahabo, sy ny sisa
Mandroso ny fanarenana ny RN44 mampitohy an’i Marovoay sy Vohidiala ary efa manakaiky ny 40% ny fandrosoan’ny asa
Vita ny tetezan’i Manaingazipo eo amin’ny RN3A mampitohy an’i Vohidiala sy Andilamena
Mandroso ny fanarenana ny RN5A mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar izay mirefy 159 km ka efa mananika ny 44% ny asa vita
Mandroso ny fanamboarana ny RN9 mampitohy an’i Toliara – Analamisampy – Bevoay – Manja, ka raha efa vita tanteraka ny mampitohy an’i Toliara sy Analamisampy dia manomboka kosa ny fanarenana an’i Analamisampy – Manja miaraka amin’ny fanorenana ny Tetezana eo amin’ny Reniranon’i Mangoky (Bac Bevoay)
Mitohy ny fanarenana ny RN12A ary efa miroso amin’ny fikarakarana ny tolotr’asa andiany faharoa miaraka amin’ny fanorenana ireo tetezana valo mampitohy an’iny làlana iny izay mahasehika Distrika telo dia Farafangana, Vangaindrano ary Taolagnaro
Mitohy ary mandroso ny fanomanana ny tolotr’asa ho amin’ny fanarenana ny lalampirenena RN13 mampitohy an’i Ambovombe sy Taolagnaro
Mitohy ary mandroso ny tolotr’asa fanarenana ny RN6 mampitohy an’Ambanja – Antsiranana ary tsy ho ela intsony dia hanomboka ny asa fanamboarana
Manakaiky ny fahavitan’ny RN43 mampitohy an’i Sambaina sy Faratsiho ary mitohy ny fanarenana ireo ampahany efa misy fahasimbana amin’ny lalana mampitohy an’i Faratsiho – Soavinandriana – Analavory
Mandroso ny fanamboarana ny Rocade-Est ary efa manodidina ny 90% ny fahavitan’ny asa
Mandroso ny fanamboarana ny Route des oeufs eny Mahitsy
Tohizana ny fanarenana ny RN5 mampitohy an’i Toamasina – Foulpointe – Fenerivo Atsinanana – Soanierana Ivongo – Mananara – Maroantsetra
Vita ireo lalana amin’ny renivohi-paritany rehetra ary singanina manoka amin’izany ireo lalana mivoaka ny tanànan’Antananarivo
Manomboka ny fanarenana ny RN12 mampitohy an’i Vohipeno sy Farafangana
Atao ny asa fanarenana làlana Hell-ville – Djamandzar Nosy Be, ny RNT18 Vangaindrano – Midongy – Befotaka, ny RNT14A Ifanadiana – Ikongo – Vohipeno, ny RN13 Ihosy – Betroka – Ambovombe, ny RNT33B Andranofasika – Ambato-Boeny, ny RN23 Mahanoro – Marolambo, ny RNS1B Tsiroanomandidy – Maintirano
Hirosoana ny fanamboarana ny fefilohan’ny Mahajilo ao Miandrivazo.
Eo amin’ny fanajariana ny tany dia maro ireo ezaka vita. Anisan’izany ny fanomezana “titres fonciers” miisa 6.476 (enina ambin’ny fitopolo sy efajato sy enina arivo) sy “certicats fonciers “ miisa 36.164 (efatra ambin’ny enipolo amby zato sy enina arivo sy telo hetsy) tamin’ny taona 2020.
Himasoana ny fampivoarana ny fanajariana ny tany eto amintsika amin’ity taona 2021 ity ka asa fanorenana “guichets uniques” miisa 9 (sivy), toy ao Fianarantsoa, Andramasina, Vohémar, Mampikony, Manja, Ambohimasoa, Andilamena, Toliara II, Mananara Avaratra. Atao koa ny fanavaozana ny trano ho an’ny Services fonciers” miisa 4 (efatra).
Natomboka ny fanorenana trano fonenana ho an’ny daholobe ka ireto Distrika 8 ireto no hisitraka izany: Fianarantsoa, Arivonimamo, Toamasina I, Antsiranana I, Mahajanga I ary Antsirabe I, Morondava ary Nosy Be.
Efa vita ny fanamboarana ny trano fonenana 30 (telopolo) ho an’ny daholobe ao Amborovy Mahajanga I. Efa natomboka ireo fanorenana trano 640 (efapolo sy eninjato) izay mitsinjara “lots” valo ao anatin’ireto Distrika ireto : Arivonimamo, Antsiranana I, Toamasina II, NosyBe, Morodava.
Natomboka koa ny fanorenana tranobe miisa 3 (telo) amin’ireto Distrika ireto : Antsiranana I, Toamasina II ary Fianarantsoa.
Efa natomboka koa ny fanorenana tranobe R+4 sivy, izay misy “appartements” 15 (dimy ambin’ny folo) ao Ivato, Distrika Ambohidratrimo, izay miisa 36 (enina ambin’ny telopolo).
Vita tanteraka koa ny “travaux de terrassement” ny toerana hananganana tanàna vaovao izay mirefy 6 (enina) hekitara ao Ivato.
Vita tanteraka koa ny “travaux de terrassement” ny toerana hanorenana tranobe R+4 sivy ambin’ny roapolo (29) izay mirefy valo hekitara ao Ivato.
Efa natomboka ary mitohy amin’ity taona ity koa ny fanadihadiana amin’ireo toerana hananganana tanàna vaovao eto amin’ny nosintsika.
4.9. Eo amin’ny lafiny angovo
Singanina manokana ny fandraisana anjara amin’ny ady Covid-19 ka nanampiana ireny CTC-19 maro teto amin’ny Nosy.
Nanaovana ezaka ihany koa ny fampitaovana Groupes Electrogenes ny CHU, ny CHRR, ny CHD ary CSB amin’ny Faritra Analamanga, Itasy ary Alaotra Mangoro.
Ny fampitaovana Centrale Photovoltaique 10 KW ny CHR, CHRD, CHRR, CHU amin’ny Faritra maro, toy Analamanga, Itasy, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Alaotra Mangoro, Anosy, Androy, Ihorombe, DIANA ary Menabe.
Distrika 99 (sivy amby sivifolo) no nisitraka ny fanazavana ny làlana amin’ny tanan-dehibe tamin’ny alalan’ny tetik’asa “éclairage public”. Jiro miisa 4.478 (valo ambin’ny fitopolo sy efa-jato sy efatra arivo) no voapetraka tamin’izany.
4.10. Eo amin’ny sehatry ny Paositra sy ny Fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra
Nanao ezaka maro ny fitondram-panjakana eo amin’ny fampiroboroboana sy ny fanatsarana ny tolotra ho an’ny vahoaka Malagasy. Nanombohana izany ny fanavaozana tanteraka ny biraon’ny paositra etsy Antaninarenina izay sady foibe no paositra modely ho an’ireo hafa rehetra. Tsy mijanona eto Antananarivo anefa izany fanatsarana izany fa natao manerana ireo distrika maro eto Madagasikara, toy ny any Antalaha, Antsiranana I, Mahajanga I, Fianarantsoa I, Toliara I ary hitohy hatrany ireo mandritra ity taona 2021 ho hanatsarana ireo tolotra ho an’ny mpanjifa.
Madagasikara mivoatra no tanjona. Eo ireo tetikasa “Smart village” izay fametrahana connexion internet isaky ny distrika izay tsy mbola manana izany. Efa tafapetraka ny any Ambatondrazaka, Ambatofinandrahana, Fandriana, Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy, Taolagnaro, Ankazoabo, Farafangana, Vangaindrano, Ambato-Boeny, Tsiroanomandidy, Fenoarivobe, Manja, Mampikony, Port-Berge ary Antanifotsy.
Amin’izao fotoana izao mbola ny 16% ny mponina eto amitsika no manana fahafahana mampiasa ny Internet. Mbola ambany izany raha amin’izao vanim-potoana iainatsika izao satria lalana iray ahafahan’ny olom-pirenena mahazo sy manaraka ny vaovao misy eto an-toerana sy ny any ivelany izany. Izay indrindra no nahatonga ny fitondram-panjakana nametraka ary manaparitaka ireny Hotspot ireny ahafahana mahazo ny connexion Internet maimaimpoana maneran an’i Madagasikara.
Natomboka tany Manakara izany ny volana oktobra 2020. Dimampolo mahery amin’izao fotoana izao ireo toerana misy ny Hotspot manerana an’i Madagasikara ary maherin’ny fito alina no mampiasa izany. Ankoatra ny eto amin’ny faritra Analamanga dia efa manana izany ihany koa ohatra ny any Fenoarivo Atsinana, Ambatondrazaka, Ambatofinandrahana, Ihosy, Vohipeno, Ambositra, Ambilobe sy ireo distrika maro hafa.
Mitohy hatrany ny fampiasana ny “e-Paiement” nandoavana ireo fanampiana isan-karazany toy ny Tosika fameno, Vatsin’ankohonana. Eo ihany koa ireo mandray ny pension, ny caisse école, ny vatsim-pianarana. Efa maro ireo asa vita ireo fa mbola maro ihany ko any asa miandry raha ny fifandraisana sy ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra no resahina. Isany misongadina amin’ity taona ity ny fametrahana ireo “Relais Poste” any Kandreho, Mandritsara, Sainte-Marie, Fort Dauphin, Antsohihy sy ny maro hafa. Eo ihany ko any fanavaozana ireo biraon’ny Paositra ao Ihosy, Ambovombe, Antalaha, Antsiranana, Manakara, Fianarantsoa ary Fenoarivo Antsinanana.
Ny ezaka rehetra natao moa dia ho tombotsoam-bahoaka. Koa ankoatran’ny fihariana dia tsy natao latsa-danja ny lafiny sôsialy.
5- Ny lafin’ny Sosialy
5- 1 Eo amin’ny sehatry ny Fanabeazana sy Fiofanana ho an’ny rehetra
Eo amin’ny fanabeazam-pirenenadia politika ankapoben’ny fanjakana ny hanatsara hatrany ny kalitaon’ny fanabeazana eto amintsika.
EPP manarapenitra miisa 30, CEG 8 ary Lycée miisa 6 no nokasaina haorina ny 2019. Ny taona 2020 dia 10 tamin’ireo EPP manarapenitra (Ambatondrazaka, Ambilobe, Betafo, Farafangana, Fenoarivo Atsinanana, Fianarantsoa, Ifanadiana, Mahajanga I, Toliara I, Ambositra) sy Lycée 5 (Antsiranana I, Toamasina II, Toliara II, Vohipeno, Ambato-Boeny) no efa vita na an-dàlam-pahavitana.
Sekoly EPP misy efitrano 2 no natsangana ary maro ireo Distrika no misitraka izany, toy : Ambatolampy, Andramasina, Antananarivo Atsimondrano, Antanifotsy, Antsirabe I, Antsirabe II, Betafo, Manjakandriana, Ambalavao, Ambanja, Ambatofinandrahana, Ambatondrazaka, Ambilobe, Amboasary Atsimo, Ambohidratrimo, Ambohimahasoa, Ambositra, Ambovombe Androy, Ampanihy, Amparafaravola, Analalava, Andilamena, Anjozorobe, Ankazobe, Anosibe An’Ala, Antalaha, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antsiranana I, Antsiranana II, Antsohihy, Arivonimamo, Bealanana, Bekily, Beloha, Beroroha, Betroka, Port Berger, Brickaville, Fandriana, Farafangana, Fenoarivobe, Fianarantsoa, Iakora, Ihosy, Ikalamavony, Ikongo, Isandra, Ivohibe, Lalangina, Maevatanana, Mahabo, Mampikony, Miandrivazo, Miarinarivo, Moramanga, Morombe, Morondava, Nosy Be, Sainte Marie, Soanierana Ivongo, Taolagnaro, Toamasina II, Toliara I, Toliara II, Tsaratanana, Tsihombe, Tsiroanomandidy, Vangaindrano, Vatomandry, Vavatenina, Vohémar, Vohibato, Vohipeno, Vondrozo, Manandriana, Mananjary, Mandoto, Mandritsara, Maroantsetra, Mahajanga I, Mahajanga II, Marovoay ary Ambato-Boeny.
Etsy andanin’izay kosa ireo sekoly EPP misy 12 ka hatramin’ny 24 efitrano izay efa vita na andalam-pahavitàna, toy ny ao : Ambatondrazaka, Ambilobe, Betafo, Farafangana, Fenerive-Atsinanana, Fianarantsoa, Ifanadiana, Mahajanga I, Toliara I, Ambositra, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Bealanana, Brickaville, Fianarantsoa, Ihosy, Vohémar.
Ny sekoly ambaratonga faharoa indray kosa izay miisa 8 dia an-dalana avokoa ny asa amin’ireto Distrika manaraka ireto: Ambalavao, Antananarivo Renivohitra,
Mahajanga I, Miarinarivo, Morondava.
Azontsika tarafina amin’izany ny ezaka atao hamerenana ny hasin’ny fanabeazana hatrany, ary tsy latsa-danja ny fandraisana mpampianatra.
Eo amin’ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arak’asa dia ny fananganana ivo-toerana fampiofanana arak’asa manara-penitra no tanjona apetraka.
Centres de Formation Professionnelle de Référence miisa 5 (dimy) misy efitrano 12 avy no efa vita ao Bealanana, Ihosy, Tsihombe, Vatomandry ary Betafo. Atao ihany koa ny famatsiana fitaovana ho an’ireo toeram-panofanana ireo mba ahafahan’ny mpianatra manantanteraka fampiharana.
Mitohy hatrany ny fandraisana mpampianatra sy mpiasa ho mpiasam-panjakana isan-taona.
Eo amin’ny fampianarana ambaratonga ambony dia oniversite maro no natsangana ahafahan’ireo mpianatra manohy ny fianarany any amin’ny faritra ary ahafahana mitrandraka sampam-piofanana mifandraika amin’ny zava-misy sy filàna ara-toekarena sy ara-piaramonina any an-toerana. Oniversite vaovao no andalam-panorenana ao anatin’ireto Distrika ireto : Soavinandriana Itasy, Fenoarivo-Atsinanana Analajirofo, Antsirabe Vakinankaratra, Antalaha SAVA, Antsohihy Sofia, Morondava Menabe, Maintirano Melaky, Taolagnaro Anosy.
Ankoatra ireo Oniversite atsangana ireo dia eo ihany koa ireo tranon’ny mpianatra izay arenina na aorina mba hitsinjovana ireo mpianatra avy lavitra toa ny any Toliara, Antsiranana, Mahajanga, Antananarivo, Antsirabe, Soavinandriana, Morondava ary Fenerivo-Atsinanana.
Ezaka manokana no atao amin’izao fotoana izao mba andraiketana ara-kajy mirindra ireo mpianatra sy mpandraharaha eny anivon’ny Oniversite manerana ny nosy. Izany no natao dia mba ahafahana manamarina sy manadio ny isan’ireo mpianatra misitraka vatsim-pianarana sy mpandraharaha mandray karama.
5- 2 Eo amin’ny sehatry ny Fahasalamana
Zo fototra ho an’ny olombelona ny fahasalamana ka natao vaindohan-draharaha hatrany. Arak’izany dia tontosa ireo asa fanorenana sy fanatsarana maro teo amin’ireo fotodrafitrasa ara-pahasalamana na dia teo aza izany ady goavana natrehan’ny firenena izany.
Efa andalam-panatanterahana avokoa ny asa fanamboarana sy ny fampitaovana ny Centre Hospitalier de Référence du District (CHRD) miisa 14 amin’ireto distrika ireto: Anivorano Avaratra, Antsalova, Ambohimahasoa, Analalava, Beloha, Mandritsara, Mampikony, Manandriana, Ankilizato Mahabo, Ivohibe, Iakora, Tanambao Manampotsy, Vohibato, Vondrozo.Trano fonenana sy efi-tranon’ny Mpitsabo miandry raharaha vaovao miisa 14 no efa eo an-dalam-panorenana eny anivon’ireo Hopitaly Manarapenitra vaovao ireo.
Efa saika vita avokoa ireo CSBII 10 (folo) natomboka tamin’ny 2019, dia ny ao Ambatomitsangana Soavinandriana, Sendrisoa Ambalavao, Ranohira Ihosy, Mahatsara Ambatondrazaka, Ambonivohitra Ambatondrazaka, Talatanangavo Ankazobe, Manjarivo Manakara, Motombositra Beloha, Antetezamintsina Andapa, Ankaratra Ambilobe.
Misy CSB II 8 (valo) hafa koa vao naorina tamin’ny taona 2020 no efa vita na eo am-pamaranana ny asa fanamboarana ankehitriny. Ireo asa fanorenana rehetra ireo dia notanterahina tao Ambodirano Vondrozo, Manja, Sampoina Amboasary-Atsimo, Maroalopoty Ambovombe, Antselibe Bekily, Marovato Tsihombe, Beahitsy Ampanihy. Ny CSB II ao Bekodoka Besalampy kosa dia nandalo fahasahiranana ny asa fananganana, efa mizotra amin’ny fanohizana ny asa isika ankehitriny.
CSBII miisa 18 ihany koa no novatsiana fitaovana fitsaboana ary fitaovam-pandrindrana asa. Ankehitriny, ireo fitaovana ireo dia efa tonga eny anivon’ny Distrika momba ny Fahasalamam-bahoaka (SDSP) tsirairay avy (Itasy miisa 1, Matsiatra Ambony 1, Ihorombe 1, Alaotra Mangoro 2, Analamanga 1, Vatovavy Fitovinany 1, Androy 4, SAVA 1, DIANA 1, Atsimo Atsinanana 1, Melaky 1, Menabe 1, Anosy 1, Atsimo Andrefana 1).
Trano fonenana sy efi-tranon’ny Mpitsabo miandry raharaha vaovao any amin’ny faritra 14 no naorina eny anivon’ny CSBII sy CSBI miisa 19 ka ny 11 amin’ireo dia efa vita tanteraka, ary ny ambiny kosa dia saiky eo an-dalam-pahavitàna. Nisitraka izany fanorenana trano izany ny ao amin’ny CSB II Maintirano, CSB II Ambatomitsangana, CSB II Sendrisoa, CSB II Ranohira, CSB II Mahatsara Ilafy, CSB II Ambonivohitra, CSB II Talatan’Angavo, CSB II Manjarivo, CSB I Antselibe, CSB I Antetezanitsina, CSB II Ankaratra, CSB II Ambodirano, CSB II Bekodoka, CSB II Manja, CSB II Sampoina, CSB II Maroalopoty, CSB II Motombositse, CSB II Marovato, CSB II Beahitse.
CSBII miisa 18 no nametrahana “panneaux solaires” mba hamatsy herin’aratra azy ireo, dia ao anatin’ireto faritra ireto izany : Itasy 1, Matsiatra Ambony 1, Ihorombe 1, Alaotra Mangoro 2, Analamanga 1, Vatovavy Fitovinany 1, Androy 4, SAVA 1, DIANA 1, Atsimo Atsinanana 1, Melaky 1, Menabe 1, Anosy 1, Atsimo andrefana 1.
Mahakasika ny Foibe Famindrana Voa (Centre de transplantation rénale) etsy amin’ny CHU Andohatapenaka dia efa mandeha ny asa fanorenana.
Efa mandeha ihany koa ankehitriny ny asa fanorenana toeram-pitsaboana amin`ny rano mafana (Centre thermal) any Betsiaka, Ambilobe.
5- 3 Eo amin’ny sehatry ny rano
Distrika maro manerana ny Nosy no mijaly rano nandritry ny fotoana maharitra satria tsy ampy ny fampitaovana maharitra ho amin’izany kanefa ny isan’ny mponina sy ny tanan-dehibe dia tsy mitsahatra mitombo hatrany.
Nanomboka ny taona 2019 dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hanao fotodrafitrasa hamatsiana rano fisotro madio ny Distrika rehetra amin’ny alalan’ny asa fanorenana vaovao na fanitarana ny efa misy.
Mihoatran’ny 40 (efapolo) ny district no nanombohana ny asa hatramin’izao, dia ireto avy : Ambanja, Antalaha, Vohémar, Antsiranana, Antsohihy, Mandritsara, Mampikony, Soalala, Ambato Boeny, Marovoay, Antananarivo, Ankazobe, Manjakandriana, Ambatondrazaka, Mananara Avaratra, Fénérive Est, Vatomandry, Antsirabe, Mandoto, Antanifotsy, Soavinandriana, Miarinarivo, Tsiroanomandidy, Maintirano, Morafenobe, Belo-sur-Tsiribihina, Miandrivazo, Mahabo, Morondava, Mananjary, Ifanadiana, Farafangana, Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy, Ambovombe, Beloha, Betroka, Ampanihy, Ankazoabo.
Ary hanomboka tsy ho ela ny ao Kandreho, Manja, Taolagnaro, Bekily, Ivohibe, Iakora.
Mifanindran-dalana amin’izay ihany koa ny fampidirana rano fisotro madio eny anivon’ny Renivohitry ny Kaomina maromaro hanatrarana ny fahazahoan’ny 60%-n’ny mponina rano fisotro madio amin’ny taona 2023.
Mahakasika an’Antananarivo manokana, 300.000 m3 isan’andro no filàna ara-drano ary mamokatra 200.000 m3 isan’andro. Misedra tsy fahampian-drano isan’andro eo amin’ny 100.000 m3 ny vahoakan’Antananarivo. Ireto ny vahaolana naroso :
ny fanamboarana fotodrafitrasa mamokatra 40.000 m3 isan’andro ao Mandroseza ahafahan’ny vahoaka misitraka rano na maintany aza
ny fametrahana forage 10 (folo) “à gros debit” 2.400 m3 isan’andro izay manome 24.000m3 isan’andro
ny fanamboarana paompin-drano 46 (enina amby efapolo) avy amin’ny forage madinika izay hita eny amin’ny fokontany saro-drano
ny fanatsarana ny fantsona sy fampitomboana ny rano hovokarina ka hahasahana ny tsy fahampian-drano miaraka amin’ny tetikasa Tana Water III.
5- 4 Eo amin’ny sehatry ny fampivoarana ny Tanora
Araka ny fampanantenana nataon’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, ny fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena izay manaja ny fenitra iraisam-pirenena dia efa nanomboka amin’ny faritra maro manerana ny Nosy.
Misy amin’ireo fotodrafitrasa ireo no efa vita ankehitriny ary maro no mbola eo andalam-panamboarana, toy ny:
Kianja Barea eo Mahamasina
Kianja manarapenitra ao Barikadimy Toamasina
Kianja mitafo manarapenitra mahazaka mpijery roa arivo ao Sambava
Kianja mitafo manarapenitra mahazaka mpijery arivo, miisa 15 (15 gymnases de 1.000 places) ao Antalaha, Antsohihy, Mandritsara, Maintirano, Mahanoro, Fenoarivo Atsinanana, Betafo, Ihosy, Ikongo, Manakara, Farafangana, Sakaraha, Ampanihy, Ambovombe ary Taolagnaro
Kianja mitafo manarapenitra mahazaka mpijery efatra arivo, miisa telo (3 Gymnases de 4.000 places) ao Toamasina I, Mahajanga I ary Toliara I
Dobo filomanosana Olaimpika, miisa roa any Mahajanga sy Toliara ary mahazaka mpijery arivo isa (1.000 places)
Kianja manarapenitra miisa telo-polo (30)
Tranon’ny tanora izay efa vita ao Vatomandry, ary misy eo an-dalam-pahavitana ao Lalangina sy mbola ho atomboka ao Sakaramy sy Manjakandriana
Ivo-toerana ho an’ny tanora sy ara-panatanjahan-tena izay haorina tsy ho ela ao Mahazoarivo Isandra sy Ankazoabo Atsimo.
Ireo foto-drafitrasa ireo no natao dia ho fitsinjovana sy ho fampiroboroboana ny tanora sy ireo mpikatroka fanatanjahan-tena any amin’ny faritra rehetra eto amin’ny Nosy mba ahafahan’izy ireo ihany koa handray lalao goavana sy lalao iraisam-pirenena ary indrindra ho fanatanterahana ny Veliranon’ny Filoham-pirenena mba hanandratana avo ny fanatanjahan-tena malagasy ho fampisondrotana ny voninahim-pirenena.
5- 5 Eo amin’ny sehatry ny Serasera sy Kolontsaina
Eo amin’ny sehatry ny Serasera sy Kolontsaina, isan’ny zo fototry ny olom-pirenena ny mahazo vaovao indrindra mahakasika ny fiainam-pirenena araka ny voafaritry ny lalàm-panorenana malagasy. Distrika maro no tsy afaka nisitraka izany noho ny faharatsian’ny fotodrafitrasa.
Noho izany, nohavaozina ny émetteurs TV sy radio miisa 74 amin’ny distrika sy tanàna miisa 54 (efatra amby dimampolo) toy ny Antsalova, Antsirabe, Foulpointe, Marovoay, Miarinarivo, Nosy Be, Beroroha, Besalampy, Betafo, Nosy Varika, Belo sur Tsiribihina, Vangaindrano, Vohipeno, Maintirano, Mitsinjo, Tsiroanomandidy, Iakora, Ampanihy, Ikalamavony, Sainte-Marie, Ambohimahasoa, Marolambo, Ambatomainty, Ambatofinandrahana, Mananjary, Anosibe An’Ala, Ambatondrazaka, Andilamena, Port-Bergé, Soalala, Ivohibe, Manja, Ikongo, Taolagnaro, Ambovombe, Ihosy, Ambositra, Ifanadiana, Miandrivazo, Mahabo, Antanifotsy, Benenitra, Bezaha, Betroka, Ambanja, Fianarantsoa, Soanieran’Ivongo, Amboasary, Vatomandry, Anivorano Nord, Fenoarivo Atsinanana, Ambatoboeny, Manakara.
Ny fampivoarana ny kolontsaina eto Madagasikara dia nifototra tamin’ny fanavaozana ireo toerana manan-tantara eto amintsika. Araka ny hitantsika dia narenina ny Rovan’i Madagasikara, Rovan’Ilafy, Rovan’i Tsinjoarivo, Rovan’Ambohimanga, Rovan’Antongona, Rova Ambositra, Lapan’ny Mpanjaka Tetembola Saint-Augustin, Palais Royal Farafangana, Palais Royal Andavakotoko Nosy Be, Palais du Roi Andriamanalina Isandra, Palais du Roi Ramaharo Vohimasina Lalangina, Palais du Roi Raindratsara Lalangina, Palais Tranovola Vohipeno, Entreé du Rova Ambohimanga, Place Bien Aimée Toamasina I, Manda Foulpointe, Tombeau Ampasamanatongotra Miarinarivo, Mozea ao Moramanga, fasan-dRainiharo, Tribunal Ambatondrafandrana, Mozea Vavitiana Ampasimazava, Mozea Rainilaiarivony, Mozea Moramanga, Mozea Masianaka Vangaindrano, Lapan’Andafiavaratra.
Mbola eo ny fanatsarana Trano Lefona Ambovombe, ny Zomba Bezavo Mitsinjo, ny Zomba an’Andriamisara efadahy Ankilivao ary ny tranon’ny kolotsaina Analakely. Mbola maro ireo an-dalam-panatanterahana izay ilàna ezaka avy amin`ny fahefana mpanatanteraka. Ankoatra ireo efa an-dalam-panatanterahana ka vinavinaina ho vita amin`ity taona ity ihany koa ny trano fihaonan`ny mpanao gazety izay hatao hivoriana sy ivo-toerana fanofanana azy ireo (Maison de la Presse). Hisy ihany koa ny fananganana ny ivo-toerana Tosik’Art ao Maevatanana, Antsirabe, Tsiroanomandidy, Mananjary, Miarinarivo, Ihosy, Sambava, Ambovombe ary Taolagnaro hampivoarana ny tanora eo amin`ny lafiny kolotsaina.
Hanomboka amin’ity taona ity ihany koa ny asa fanarenana an’ireo Trano Mahitsielafanjaka, ny Lapa Manampisoa ary ny Lapa Tranovola ao amin`ny Rovan`i Madagasikara. Tanjona ny hanatrarana ireo vinan`ny Filoham-pirenena hametraka tantara ho tombotsoan`ny taranaka.
5- 6 Eo amin’ny sehatry ny fiahiana ny mponina
Toy izao ny ezaka efa natao hatramin’ny taona 2020:
Fanokafana ny toeram-pisakafoanana “Kaly Tsinjo” ho an’ny marefo ara-pivelomana tao amin’ny distrika 12 (roa ambinifolo) Antananarivo Renivohitra, Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily, Amboasary, Betroka, Ampanihy, Toliara, Fenerive-Atsinanana, Toamasina I, Fianarantsoa I
Fananganana biraom-panjakana hanatsarana ny asan`ny ministera misahana ny Mponina miisa fito-ambin`ny folo (17) any aminy ireto distrika ireto : Andilamena, Vohibato, Isandra, Ikongo, Mampikony, Ihosy, Antsiranana II, Mahajanga II, Besalampy, Benenitra, Manandriana, Fenoarivobe, Mandoto, Andapa, Soavinandriana, Befotaka, Vondrozo
Fananganana ivotoerana fikarakarana ny zokiolona eto Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa sy Toliara
Fananganana ivotoerana miisa 5 no kasaina mahakasika ireo niharan’ny herisetra mifototra amin`ny maha-lahy sy ny maha-vavy any Farafangana, Mahajanga I, Ambovombe, Ihosy ary Antananarivo
Fananganana ivotoerana miisa telo (3) fihainoana sy fanoloran-kevitra araky ny lalàna any Beloha, Amboasary-Atsimo sy Miarinarivo.
Fananganana ivotoerana fandraisana an-tanàna sy fanofanana ireo olona manana fahasembanana miisa efatra (4) any Manakara, Toamasina I, Moramanga sy Morondava
Fananganana ivotoerana fandraisana vonjimaika ny ankizy tsy misy mpiahy any Nosy be
Fanohanana indrindra ny tanora vavy sy lahy amin`ny asa fanatsarana ny fari-mpiainany. Izany dia tanterahana amin`ny fanomezana fitaovana fanjairana, fambolena, fambolena sy fiompiana, asa tanana, sns. Distrika 80 no misitraka an’izany amin’ny ity taona 2020
Fanampiana ireo tratry ny tsy fanjarian-tsakafo any Amboasary, Ambovombe, Beloha, Tsihombe, Betroka, Bekily, Ampanihy, Antananarivo I, Toamasina I, Fianarantsoa, Toliara ary Fenoarivo-Atsinanana
Fandaharan`asa famindram-bola ho an`ny fampandrosoana ny olombelona any amin’ny distrika 13 (telo ambin`ny folo) ireto : Faratsiho, Betafo, Ambohimahasoa, Vohipeno, Toamasina II, Mahanoro, Betioky, Toliary II, Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Bekily
Fandaharan`asa ara tsosialy mamokatra (FSP) izay manampy tokantrano any amin’ny Distrikan’i Arivonimamo, Manandriana, Vangaindrano, Isandra
Ao anatin’ny sehatra Vola Takalon’Asa dia fanarenana ny fotodrafitrasa voan`ny voina ao amin’ny distrika Vatomandry, Manakara, Isandra, Ankazoabo Atsimo, Antananarivo Renivohitra no notanterahana.
Izany raha fehezina ny fotoana nolalovantsika sy ny fanantanterahana ny vinavin’asa tamin’iny taona 2020 ka hatramin’izao.
Nanampy tamin’ny lafin’ny fifandraisana amin’ny any ivelany ny diplomasia Malagasy, fa indrindra indrindra nandritry ny fotoana niatrehatsika ny valanaretina. Nanamora ihany koa ny fifampiresahana amin’ny masoivohon’ny firenana avy any ivelany izy.
Alohan’ny hamaranako ny famelabelarana dia misaotra anareo manokana aho sy ny governemanta manontolo tamin’ny fanomezan-tànana ka tsy nisalasalanareo nirotsaka an-tsehatra nanampy tamin’ireo asa sy ireo hetsika rehetra ireo.
Nibahana teo amin’ny fiainam-pirenentsika sy izao tontolo izao ity valanaretina Covid-19 ity. Toy izany ihany koa ny vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo. Kanefa ireny no ezaka natao ary mbola tohizana.
Na teo aza ny krizy isankarazany ireny izay nitondra hisatra, ahiahy sy tebiteby teto amintsika dia tsy nojerim-potsiny ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Notohizantsika araka izay fahafahana manao izany ireo tetik’asa rehetra voasoritra tao amin’ireo Velirano 13 nentin’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA.
Heno sy hitanareo teo izy ireny, hitanareo any amin’ny toerana nahavoafidy anareo ihany koa. Hita ny vahoaka ihany koa. Ekenay fa tsy misy ny fanaperana, fa azontsika atao ny mandrefy ny ezaka hitondrana vahaolana, hanarenana ny vokatry ny fahatarana maro teto amin’ny firenena. Manana finiavana isika hanova ny tantaran’ity firenena iombonana ity.
Mbola eo am-panohizana izany rehetra izany izao ny fitondram-panjakana ary manamafy ny ezaka hanatrarana ireo tanjona voasoritra sy efa nambara hatrizay nanomboka ny taona 2019 tao anatin’ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana.
← Fitsidihan’ny Praiminisitra ny distrikan’Isandra
Teny fampidirana nataon’Andriamatoa Praiministra nandritra ny Fihaonan’ny Governemanta sy ny Solombavambahoaka →
Allocution du Premier ministre – 28 09 19
FANAMABARANA NATAON’ANDRIAMATOA PRAIMINISITRA MAHAFALY SOLONANDRASANA OLIVIER